I-Interactive Terminal iwuhlelo lokurekhoda bukhoma lokuphathwa kwekilasi elihlakaniphile, elinomsebenzi wokuqopha bukhoma nezinkulumo ezibukhoma. Isetshenziselwa kakhulu ikilasi elivulekile kanye nezifundo zokurekhoda ezikoleni, isekela ukuqopha isifundo sokufundisa esiphelele ngevidiyo nomsindo, futhi isekela ukwabelana ngezifundo zokufundisa kusukela ekilasini elilodwa kuya kwamanye amagumbi okufundela.Le nto eyegumbi lokusingatha.
I-Interactive Terminal iwuhlelo lokurekhoda bukhoma lokuphathwa kwekilasi elihlakaniphile, elinomsebenzi wokuqopha bukhoma nezinkulumo ezibukhoma. Isetshenziselwa kakhulu ikilasi elivulekile nezifundo zokuqopha ezikoleni, isekela ukuqopha isifundo sokufundisa esiphelele ngevidiyo nomsindo, futhi isekela ukwabelana ngezifundo zokufundisa kusuka ekilasini elilodwa kuya kwamanye amakilasi.
Ukwabelana ngekilasi lekhwalithi: Ukwakhiwa kwekilasi lesikole esimaphakathi nedolobha elinezinsiza zokufundisa ezisezingeni eliphezulu kuyinkulumo esebenzisanayo yokuqopha nokusakaza ikilasi, izinsiza zokufundisa ezisezingeni eliphezulu zisakaza ividiyo, okulalelwayo, ihluzo nombhalo ngeplatifomu esebenzisanayo, futhi ilondolozwe njengezinsiza zokufundisa ngokurekhoda nokurekhoda. uhlelo lokusakaza, Ukusakazwa bukhoma, okufunwa kakhulu, ukuphatha kanye nokulawula okumaphakathi kwezinsiza zokufundisa ngesofthiwe yesikhulumi sezinsiza.
* Ukufundisa kwe-K-12 Interactive (Nge-software, igumbi lokusingatha elisebenzisanayo lingasebenzisana negumbi Lesifundo)
* Ukufunda kude (Umfundi angafunda ebangeni elide)
* Ukufunda ku-inthanethi (Umfundi angafunda ku-inthanethi)
* Imfundo ye-K12
* Imfundo ephakeme
* Imfundo Yezandla
Okwedlule: Ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo
Olandelayo: I-Conference Interactive Flat Panel
Isixazululo Esisebenzayo Setheminali
1.Itheminali Esebenzisanayo* Okwegumbi lokusingatha* Ubukhulu: 586*358*65mm;* I-Dual OS (Linux + Windows);* I-Live Recording System enesoftware;* I-OPS eyakhelwe ngaphakathi: i3, 4G, 128G + 1T, WIFI, Win10;* Ikhamera yedokhumenti;
* Idizayini ekhiyekayo enekhibhodi eyakhelwe ngaphakathi
* Irimothi engu-2.4G+ enemakrofoni (Uma uthanda)
2.HD amakhamera* Ikhamera ye-4-mesh ye-HD* Ipheya elingu-1/2pcs= Elothisha nelomfundi* Isixazululo: 1920 * 1080
3.Imakrofoni elengayo* Irediyasi yokubonwa komsindo 6M
4.LED Interactive Panel 65inch (Ezinye izibonisi ozikhethela)
* I-Android 8.0 OS
* Iphaneli yesikrini sokuthinta esingu-4K, i-anti-glare;
* 20 amaphuzu touch
Fro Igumbi Lezifundo
1.Itheminali Esebenzisanayo* Okwegumbi lokusingatha*Ubukhulu: 240*175*36.5mm;*I-Dual OS (Linux+Windows);*Live Recording System nge-software;*Ikhompyutha ye-OPS eyakhelwe ngaphakathi: i3, 4G, 128G, WiFi, Win10;*Irimothi engu-2.4G+ enemakrofoni(Ngokuzithandela);
Ikhamera ye-2.HD* Isiqephu esisodwa, esomfundi* Isixazululo: 1920 * 1080* Imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi
3.LED Interactive Panel 65inch (Ezinye izibonisi ozikhethela)
bukhoma uhlelo lokuqopha
ukufundisa bukhoma ku-inthanethi